Eofrata - Wikipedia
Sarintany maneho ny reniranon'i Tigrisy sy i Eofrata
I Eofrata dia renirano ao Azia izay manana halavana mirefy 2780 km. Izy sy ny renirano Tigrisy (na Tigra) no enti-mamaritra ilay faritra atao hoe Mesôpôtamia na Mezôpôtamia.
Io renirano io dia mahazo rano avy amin' ny rotsak' orana sy ny fitsonihan' ny ranomandry ka miovaova ny habetsahan' ny rano ao aminy satria ny antsasaky ny rano ao aminy dia mivarina ao hatramin' ny volana Marsa ka hatramin' ny volana Mey ary ny habetsahany dia milatsaka any amin' ny 300 m3/s raha 830 m3/s ny salan' izany (eo amin' ny fidirany ao Siria). Amin' ny fotoana mahabe azy dia mahatratra 5200 m3/s izy ka miteraka tondrandrano izany indraindray. Miovaova ny habetsahan' ny rano raha ampitahaina amin' ny taona tsirairay. Tany amin' ny 15 km3 amin' ny fotoan' ny haintany tamin' ny taona 1958-1962 fa 58km3 kosa izany tamin' ny taona 1969.
I Eofrata ao Iràka
Mihena koa ny habetsahan' ny rano rehefa mamakivaky ireo faritra maina i Eofrata noho ny fieton' ny rano, indrindra noho ireo farihy voatr' olombelona sy ny fitrofana ny rano hanodrahana tanimboly. Noho izany, raha 28km3 ny habetsahan' ny rano miditra ao Siria dia latsaka 26 km3 izany rehefa any amin' ny sisintany irakiana, na dia misy aza ny renirano madinika hafa mivarina ao (izay manome 1,75 km3) ary tsy misy afa-tsy 14 km3 izany rehefa tonga ao Nassiriya ao atsimon' i Iràka.
I Eofrata dia loharanon-disadisa eo amin' i Iràka sy i Siria ary i Torkia, satria i Torkia dia manamboatra tohodrano betsaka loatra ka mampihena ny habetsahan' ny rano mankany amin' ireo firenena hafa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Eofrata&oldid=1013011"
Voaova farany tamin'ny 24 Jolay 2021 amin'ny 07:48 ity pejy ity.